केही मानिसहरू कसरी साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
तपाईंले आफैलाई ‘किन केही मानिसहरू साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ?’ जस्ता प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ ? तर मानिसको भाग्य राम्रो वा नराम्रा भन्ने कुरा हुदैँन । मनोविज्ञ रिर्चड वाइजमनका अनुसार मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन् ।
अर्कोतर्फ आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू स्वभावैले धेरै गहिरिएर परिस्थितिको समीक्षा गर्छन्। जुन उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक भइदिन्छ। वाइजमन भन्छन्, ‘उनीहरूका काम सफल हुनका लागि धेरै समय लाग्छ र उनीहरूको सोचाई धेरै फलदायी समेत भएको पाइंदैन।’
सधैभरी यसले काम गर्छ भन्ने छैन तर सकारात्मक सोचले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गतिशील भइरहन भने सघाउँछ। यो गुणको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि त्यसले अरू मानिसहरूलाई सहजै आकर्षित गर्छ। आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरूमा भने निराशावादी सोच हावी भइदिन्छ। वाइजमनका अनुसार आफ्ना उदास शैलीका कारण मानिसहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पञ्छिन खोज्छन्।
उनीहरू त्यस्तो परिस्थिति बुझेरै अगाडि बढ्छन्। यसले खराब समयलाई पनि राम्रोमा परीणत गर्छ। तर आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू स–साना नकारात्मक कुराबाटै चिन्तित हुन्छन्। उनीहरू भविष्य बेरङ्गको हुँदैछ भन्ने सोचेर पर्यत्न गर्नु नै बेकार रहेको ठान्छन्।